Sidee loo sameeyaa cilmi-baaris guud oo muhiim ah oo ku saabsan Amazon?
cilmi-baarista muhiimka ah waa qayb muhiim u ah Ololaynta ugu fiicnaanta Amazon oo ah in la sameeyo marxaladda bilawga ah ee alaabta aad soo saarto Amazon. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay raadinta dhammaan shuruudaha raadinta ee munaasibka ah iyo kuwa sarreeya oo kor u qaadi kara iibintaada. Waa muhiim in la doorto dhamaanba labada eray ee ku habboon in macaamiishaada laga yaabo inay isticmaalaan si ay u helaan badeecooyinkaaga ama waxyaabaha la xiriira. Waa fure u ah guusha sida ugu habboon ee sheyga ee su'aalaha raadinta ee user waxa lagu go'aamiyaa iyada oo la xidhiidha ereyada raadinta ee ku saleysan liiska. Haddii aad iska indho tirtay ugu yaraan hal erey oo raadin raadin ah, markaa fursadahaaga aad ku muuqan karto natiijooyinka raadinta ee mid ka mid ah su'aalaha isticmaalaha ayaa hoos u dhigi doona. Si looga fogaado maqnaanshaha iibka waxaad u baahan tahay inaad falanqeynto dareennada raadinta Amazon iyo sameyso liistada shuruudaha raadinta ugu haboon. In this article, waxaan ka wada hadli doonaa siyaabaha sida loo sameeyo iyada oo loo marayo cilmi baarista keyword Amazon sida pro. Talooyinkan oo dhan waxay ku saleysan yihiin khibradeena shakhsi ahaaneed. Sidaas awgeed, waxaanu u wici karnaa si waxtar leh oo wax ku ool ah.
Talooyin iyo qalab kaa caawinaya inaad samayso tayada cilmi baarista Amazon
Farsamada ugu caansan ee la helo ereyada ugu muhiimsan ee raadinta ee Amazon waa inaad adigu ku ridato kabaha macaamiishaada. Taasi waa sababta bilaabista ololaha cilmi-baarista adoo ka fekeraya ereyada aad macaamiishu u adeegsan karto si aad u hesho waxyaabahaaga. Waa in aad tixgelisaa arimaha noocan oo kale ah marka ay soo iibsanayaan alaabtaada, nooca su'aalaha ay qabaan, iyo nooca alaabta ay ka iibsan karaan meeshii alaabtaada.
Isku soo uruuri dhammaan shuruudaha raadinta ee maskaxda ku haya oo eegaya iyaga oo isticmaalaya shabakadaha shabakadaha bulshada si ay u arkaan waxa ay dadku ka hadlaan wax ku saabsan alaabtaada. Waxay kaa caawinaysaa inaad wax ka bedesho baahidaada liis gareysigaaga oo aad buuxiso. Halkan waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah isku midka, isir-yaraha, iyo soo-gaabinta oo badanaaba loo adeegsado bulshada dhexdeeda.
Weligaa ma yaabin sida loo isticmaalo Amazon ujeedooyinka cilmi baarista muhiimka ah? Waxay u shaqaysaa si quruxsan. Waxaad ubaahan tahay inaad ku xirtid waraaqo dhowr ah sanduuqa raadinta iyo alaabada si toos ah ayey u muuqan doontaa talooyin. Shaqadan autocomplete kuma siin doonto xogta ugu macquulsan sababtoo ah waxay muujineysaa ereyada raadinta badiba. Si kastaba ha noqotee, waad hubsan kartaa in laguu soo bandhigi doono shuruudaha raadinta sharciga ah ee lagu dari karo liiska alaabtaada.
Waxaad u baahan tahay inaad si sax ah iyo bukaanka u isticmaasho adigoo isticmaalaya shaqadan autocomplete. Waxaad ubaahan tahay inaad raacdo magaca alaabtaada adoo leh waraaqaha alfabeetada oo xusuuso waxa soo socda. Waa inaad heshaa ereyada ugu muhiimsan oo xooggan oo inta badan la mid ah waxyaabaha aad tafaariiqda. Intaa waxaa dheer, qaybaha la soo jeediyey ayaa kaa caawin kara inaad hesho kooxo kale si aad u qorto waxyaabahaaga.
Amazon soo jeediyay
Sida ay tilmaamayso tilmaamaha darajada Amazon, alaabtaada waxaa lagu arki doonaa oo keliya shuruudaha raadinta ee aad geliso liiskaaga iyo dhabarkaaga. Waxaa loola jeedaa in aad ku darto oo keliya shuruudaha raadinta qadarka sare ee liiskaaga laakiin sidoo kale la xidhiidha ereyada dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee ku kordhinaya fursadahaaga si aad u beegsato macaamiishaada mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad sameysaa kaliya kiis haddii aad leedahay meel dheeraad ah oo loogu talagalay ereyada muhiimka ah. Istaraatijiyadahaaga hoose waa inay ahaadaan kuwo daboolaya shuruudaha raadinta ee sharaxaya alaabtaada. Haddii aad jeceshahay in aad heshid shuruudaha ugu muhiimsan ee raadinta adoon wakhti badan iyo dadaal aad ku qaadato, waxaad si fudud u samayn kartaa a. falanqaynta tartanka. Ilaha muhiimka ah ee macnaha erayga muhiimka ah lama dhimi karo. Raadi erayadaas mawduucyada tartanka tartanka, rasaastada, iyo sharaxaada. Halkan waxaad ka heli kartaa ereyada muhiimka ah ee aanad u malaynaynin. Xaqiiji in alaabta la isticmaalo ay ku jirto magaca (f. e. maqaar madow; maqaarka qalalan; haweenka, iwm.
Waxaan mar walba sheegaa in awooda macnaha ereygan aan lagu qiimeynin dhabta qiimo. Qalabkani wuxuu noqon karaa mid waxtar leh maahan oo kaliya luqadaha, laakiin sidoo kale ganacsatada Amazon. Waxay si gaar ah waxtar u leedahay marka ay timaado alaabooyinka laga yaabo in ay leeyihiin hal magac ka badan, ama waxaa loo isticmaali karaa mawduucyada kala duwan. Thesaurus waxay ku siin kartaa noocyo kala duwan oo erayo iyo isku mid ah.
Isticmaalida qalabka loogu talagalay cilmi-baarista muhiimka ah, waa in aad maskaxda ku haysaa waxyaabahan soo socda:
isticmaali foomamka ereyada iyo kelmadaha;
raadi erayada sharaxaya shayga aad tafaariiqda;
ha ilaawin samaynta qoraallada caadiga ah;
ha isku dayin inaad halkaas ka hesho macnayaal isku mid ah magaca magacyada.
Dhamaan farsamooyinka farsamooyinka cilmi-baarista ee hore loo soo sheegay waxay waxtar u yeelan karaan haddii aad haysato hal xariiq oo alaab ah iyo wax badan oo ka mid ah wakhti lacag la'aan ah. Si kastaba ha noqotee, waxay ku siin karaan natiijooyin isku mid ah qalab cilmi baaris oo muhiim ah. Haddii aad haysato wax badan oo ka mid ah waxtarkaada oo aad jeclaan lahayd inaad kobciso iibkaaga, barnaamijka Amazon raadinta xirfadlaha ah wuxuu noqon doonaa mid aad ufiican ganacsigaaga. Qorshaha Guud ee Google
Google waa kan ugu weyn raadinta aduunka, halka Amazon waa ugu weyn ee cilmi baarista. Taas macnaheedu waa in xogta ugu badan ee raadinta ee Google ay la mid tahay Amazon. Isticmaalidda qalabkan, waxaad ka heli kartaa fikrad wixii aad macaamiishaada u raadin kartid oo aad ku heli karto shuruudaha raadinta si aad u beegsato kombuyuutarkaaga Amazon-kaaga. Qalabkani waa bilaash inuu isticmaalo wuxuuna ku siin karaa macluumaadka ugu saxsan webka. Isticmaalidda GKP, waxaad awoodi doontaa inaad hubiso mugga raadinta ee shuruudahaaga raadinta ee la raadinayo iyo sidoo kale falanqeynta jagooyinkaaga tartanka tartanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u noqoto in xogta GKP ay wax yar ka duwan tahay Amazon, sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso.
Sidaa daraadeed, Qorshaha Ku-Meel-Gaarka ah ee Google (Google Keyword Planner) ayaa sameeya khiyaamada laakiin wuxuu noqon karaa mid caqabad ku ah isticmaalka. Waxaa intaa dheer, waxay u baahan tahay koontada AdWords. SEMRush waa qalab cilmi-baaris oo muhiim ah oo kaa caawin doona inaad heshid mudo-dheer
ereyada raadinta ee ku salaysan falanqayn iyo cilmi baarayaal badan. Iyada oo qalabkani, waxaad ku dhejin kartaa tartamayaashaada waxaadna fiirisaa ereyada raadinta oo ay u keenaan gaadiidka ugu badan. Qaybta ugu wanaagsan ee ay tahay waa in ay muujin karto jagooyinka keywords ee booska darajo Source .